လေ့လာရာတွင် ပျော်မှတော် မည် - Myanmar Network
လေ့လာရာတွင် ပျော်မှတော် မည်
Posted by Kyaw Win Tun on January 26, 2012 at 13:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ပထမဆောင်းပါးတွင် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရာ၌ ထားလေ့ရှိကြသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ရည်ရွယ်သည့် အတိုင်းပြောနိုင် ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် နားထောင်နိုင်မှုရှိမရှိကို ဆန်းစစ်ကြည့်နိုင်သည့် စံ အချို့ ကို အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ရည်ရွယ်ချက် နံပါတ် (၅)၊ (၆) နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်တင်ပြလိုပါသည်။
(၅) အားလပ်ချိန် ဗဟုသုတ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အထောက်အကူရရန်
ရုတ်တရက် စဉ်းစားကြည့်လျင် ဤရည်ရွယ်ချက်ကို အရေးကြီးသည်ဟု ထင်စရာမရှိပါ။ ဘာသာစကားလေ့လာရသည့် အခြားအကြောင်းတို့ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင် ဤအကြောင်းကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာသူများကိုလည်း သိပ် တွေ့ ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ သော် အားလပ်ချိန်၌ ဗဟုသုတရှာလို၍ သို့ မဟုတ် ပျော်စရာရှာလို၍လည်းအင်္ဂလိပ်စာ၊စကား ကိုလေ့လာသင့်ကြပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေကြသည့် ယနေ့ လူငယ်လူလတ် အများစုသည် အင်္ဂလိပ်စာကို သူငယ်တန်းမှစ၍ သင်ယူခဲ့ရသူများဖြစ်ကြသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာတန်းကို သင်ယူနေကြသည့်အချိန်အထိ ထမင်းစားရေသောက် အဆင့်ကိုပင် ဘာကြောင့် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မသုံးတတ်ကြသနည်းဟု မေးစရာရှိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာကို မသိမသာ သော်လည်းကောင်း သိသိသာသာသော်လည်းကောင်း ရွံ့နေသောကြောင့်ဟုပြောလျင် လွန်မည်မထင်ပါ။ သင်ယူခဲ့ရပုံ၊ သင်ယူခဲ့ရသည့်သင်ခန်းစာနှင့် သင်ယူခဲ့ရသည့်အခြေအနေတို့ က အင်္ဂလိပ်စာပိုဒ်တခုကို ကောက်မဖတ်ချင်အောင်အထိတွန်းပို့ နေသည်ဟု ထင်စရာရှိပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် သင်ယူပုံသင်ယူနည်းကိုကြည့်လျင် ပြန်အသုံးပြုတတ်ဖို့ ထက် ပြန်စာအံတတ်ဖို့ ကို ဦးစားပေးရ၏။ သင်ယူရသည့်သင်ခန်းစာများသည်လည်း သဒ္ဒါဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ကျောင်းသားများက ပြန်သုံးပြသည့် အဆင့်(Production)အထိမပါဘဲ ၎င်းတို့ ကို သိရုံသိသည့် (Recognition) အဆင့်အထိသာပါ၏။ သင်ယူရသည့်အခြေအနေကလည်း ကျောင်းသားအရေအတွက်များပြားခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဆရာကိုကြောက်ရပြီး သိချင်တာ မမေးရဲ သောကြောင့်လည်းကောင်း အင်္ဂလိပ်စာကို စာမေးပွဲနှင့်သာ တွဲမြင်လေ့ရှိ၏။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဤဘာသာစကားနှင့်စာကို လေ့လာတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီးသောအခါ ကျောင်းသားဘ၀က အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပတ်သက်သည့် ခံစားမှုများ ပြန်ပေါ်လာပြီး လေ့လာသည့် အခါတွင်လည်း ကျောင်းတွင်သုံးခဲ့သည့် နည်းများကိုသာ ပြန်သုံးတတ်ကြပါသည်။ ယေဘူယျ ဆိုရလျင် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖြစ်ရန် အဆုံး၌ စာမေးပွဲတစ်ခုကိုသာ ဦးတည်တတ်ကြပြီး ထိုစာမေးပွဲပြီးလျင် သုံးကြည့်ဖို့ ရန် မကြိုးပမ်းတော့ပါ။ ထို့ ပြင်လေ့လာရာ၌လည်း သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများကိုသာ မရအရသိအောင် အားထုတ်တတ်ကြပြီး ပြန်သုံးဖို့အခက်အခဲရှိနေတတ်ကြပါသည်။
ထို့ ကြောင့် အားလပ်ချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်များကိုဖတ်သင့်သည်။ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင် သတင်း သီချင်းများကိုနားထောင်သင့်သည်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်သည့်နေရာများကိုရှာထားသင့်သည်။ မရှိလျင် သူငယ်ချင်းများ ဆုံတွေ့ ပြောသင့်သည်။ အနည်းဆုံး G talk ပြောလျင်ပင် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် စာရိုက်သင့်ပါသည်။ ထိုအခါ စာ ဟုမြင်သောအမြင်လျော့လာပါလိမ့်မည်။ နေ့ စဉ်ဘ၀ထဲတွင်အသုံးတည့်သော ဘာသာစကားသာဖြစ်သည်ဟု မြင်လာပြီး ပျော်လာပါလိမ့်မည်။ သဒ္ဒါနှင့်ပတ်သက်သော အသုံးများကိုလည်း ကျက်မှတ်ဖို့ အားမထုတ်ရတော့ဘဲ အလိုလိုသိလာပြီး ပြန်သုံးတတ်လာပါလိမ့်မည်။ ပထမဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်စာ စ ဖတ်ရန်ကြိုးစားလျင် မိမိစိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာကို စရှာကြည့်ပါ။ နားထောင်လျင်လည်း ဤအတိုင်းပင်။ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာ non fiction ဟုခေါ်သော ပထ၀ီ၊ သမိုင်း စသည့် စာအုပ်များ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်သော fiction ဟုခေါ်သည့် ၀တ္ထုကဗျာ စသည့် စာအုပ်များ၊ သတင်း အားကစား၊ ရုပ်ရှင်စသည့် ကြည့်ရှုနားထောင်စရာများ များစွာရှိပါသည်။ ယခု ဤ ၀က်ဗ်ဆိုဒ်တွင် အသင်းဝင်ထားသော အင်တာနက်နှင့် မစိမ်းသူများအဖို့ မူ ဖတ်စရာ၊နားထောင်စရာ များ များပြားလွန်းသည်ဟုပြောလျင် လွန်မည်မထင်ပါ။ (ဥပမာ Wikipedia ကို လွယ်ကူသော အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ရေးထားသော website ရှိပါသည်။http://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page)
(၆) ပညာရပ်တစ်ခုကိုပိုမို၍ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် လေ့လာရာတွင် အထောက်အကူရရန်
မိမိ သင်ယူနေသော အထူးပြုဘာသာရပ်တစ်ခုကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကောလိပ် တက္ကသိုလ်တန်းဘာသာရပ်များကိုသော်လည်းကောင်း ကျွမ်းကျင်ရန် ထိုပညာရပ်နှင့်ဆိုင်သည့် ပြဌာန်းဖတ်စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်၊ သုတေသန စာစောင်များစွာတို့ သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အရေအတွက်များစွာထွက်နေပါသည်။ website များပေါ်တွင်လည်း အချို့ ကို အခမဲ့ဖတ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်ကို လေ့လာနေသူအတွက် ပြည်ပနိင်ငံများရှိ
စာ နယ် ဇင်း များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖတ်နိင်ပါသည်။ အချို့ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်သောဝက်ဗ်ဆိုဒ်များ ရှိတတ်ကြပါသည်။ ဥပမာ Stanford တက္ကသိုလ်က ဒဿန ဗေဒပညာရပ်(Philosophy) နှင့်ပတ်သက်သော စာမျက်နှာတစ်ခုကို အခမဲ့ဖတ်နိုင်ရန်ဖွင့်ထား၏။http://plato.stanford.edu/
ထို့ ပြင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာစောင်များကို စာကြည့်တိုက်များတွင် အပိုဖတ်နိုင်သူများက ပေးထားသည့် ပြဌာန်းစာအုပ်ကိုသာ ဖတ်သူများထက် သာမည်၊ ရှေ့ ရောက်မည်ဆိုသည်မှာ ပြောဖို့ လိုမည်ပင်မထင်ပါ။
ဘွဲ့ ဒီဂရီသင်တန်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိ်၏ အတတ်ပညာ အသိပညာ မြင့်လို၍လေ့လာလျင်လည်း အထက်ဖော်ပြပါ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်စာကို ကျွမ်းကျင်ပါက လွယ်လင့်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာစကားကို စတင်လေ့လာရာတွင် မည်သို့လေ့လာသင့်ပုံကို နောင်လာမည့် ဆောင်းပါးများတွင်ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။
Permalink Reply by zaw phyo naing on January 26, 2012 at 18:49
I'm looking forward to yours posts. Thanks.
Permalink Reply by Min Thant Lwin on January 27, 2012 at 11:26
အခုလိုမျိုး စေတနာရှေ့ထားပြီး ရှင်းပြပေးတာ ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
တကယ်ကို ကျွန်တော့်အတွက် အကျိုးရှိစေလို့ (ထပ်ပြောပါရစေ) အရမ်း အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.။
Permalink Reply by Mary Kaw TIn on January 27, 2012 at 14:41
Permalink Reply by AYOOB AKHOON on January 27, 2012 at 16:22
Permalink Reply by 1winemakefiut on January 27, 2012 at 19:21
Millions of Thanks , my friend.
Permalink Reply by Maungnanda on January 28, 2012 at 9:55
Thank you very much sir.I amalearner.I have to KNOWLEDGE.
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 29, 2012 at 18:47
Permalink Reply by 1dlid2erlfqod on February 1, 2012 at 12:11
thank you very much.May you be happy.
Permalink Reply by Ven.Siddhibala(အရှင်သိဒ္ဓိဗလ) on February 8, 2012 at 16:07